Rooble oo tacsi u diray Fanaaniinta Qaranka iyo umada Somaliyeed Geeridii ku timid Faadumo Nagruuma. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Rooble oo tacsi u diray Fanaaniinta Qaranka iyo umada Somaliyeed Geeridii ku...
Rooble oo tacsi u diray Fanaaniinta Qaranka iyo umada Somaliyeed Geeridii ku timid Faadumo Nagruuma.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilka sii-haya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay geerida ku timid Fanaanadii Faadumo Cali Nagruuma oo ka tirsaneyd hobolada Qaranka Waaberi.
Ra’iisul Wasaare Rooblen ayaa tacsi u diray qoyska Marxuumada, bahda fanka iyo guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in Faadumo Cali Nagruuma ay kamid aheyd tiirarka fanka Soomaaliyeed
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka ayaa shaacisay in shalay Cudurka COVID-19 ee dalka ugu geeriyoodeen 15 qof, waxaana Gobolka Banaadir laga helay in ka badan 250 qof, kadib markii baaritaano kala duwan lagu sameeyay.
Previous articleMaxkamadda Ciidamada oo u fadhiisatay kiiska saddex eedeysane oo ka tirsan Al-Shabaab, kana billaabatay Dhuusamareeb..
Next articleMatoor ololaya oo diyaarad ka soo dhacay oo ku dul dhacay guryo la dagan yahay
Mdaxtooyada Turkiga oo sheegtay in Erdogan uu Khadka Telefoonka...
Mdaxtooyada Turkiga ayaa waxaa ay goor sheegtay inuu Madaxweyne Rajab Dayib Erdogan uu Khadka Telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Raashiya, Valadamir Putin. Labada Madaxweyne ayaa...
dilkii wariyihii u dhashay dalka Sacuudiga ee Jamaal Khaashuqji oo wali...
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo uga digtay Erdogan in uu ku...
Dowlada Federaalka oo shaacisay Dilka Sargaal sare oo Alshabaab ka tirsan